Umndeni nomntwana. It bekulokhu izindaba olukhulu umndeni. Kodwa nge obhekwe abazali imvuthu nakanjani abhekane neqiniso lokuthi abazi ukuthi ukuhlinzeka ukunakekelwa efanele nokuthuthukiswa ingane. Ngezinye izinyanga 4 kukhona izinguquko eziphawulekayo ukuziphatha kwengane. Ngaphezu kwalokho, kusukela kwazalwa ingane bacale kutfutfukisa ezithintana ngokuphila kwabo kwesikhathi esizayo. Yingakho kubalulekile ukwazi ukuthi nokuthi uzosinikeza kanjani kule nkathi, indlela yokuhlakulela ingane ngemuva kwezinyanga ezingu-4.
I efanele ekukhuleni kwengane ngemuva kwezinyanga ezingu-4 kwenzeka isikakhulukazi ngesisekelo zomzimba walo. Iqiniso liwukuthi ngalesi yobudala ingane iqala likhula futhi ikhula ngesisindo. Ngenyanga eyodwa, kufanele sithole mayelana 800 amagremu bese wengeza 2-2.5 amasentimitha ukuphakama. Ngaphezu kwalokho, ukukhula komntwana at 4 izelwe kuyabonakala ngaphandle - ikhanda lakhe siya ezinkulu, kanye nesifuba. Ngesikhathi ingane iyaqala kakade ukuqonda futhi ukuhlukanisa isikhathi sosuku. Ngakho, kakade 4 izelwe kwakheka ingane ngumuntu "isimiso sansuku zonke." Yena zaphawula inombolo bese umsebenzi ingane boom ebusuku nemini.
Lo mntwana 4 izinyanga ubudala kakade yakha amanye ukunyakaza ethize. Phakathi nale nkathi, yena washikashikeka ohlwitha amathoyizi phezu indlwana, uzama phenduka esiswini sakhe. Ekukhuleni kwengane ngesikhathi 4 izinyanga yokuphila ihilela yokuthi ingane kungase kudingeke ukushintshanisa ikhanda e ngakuphi uzwa izwi alijwayele (umama noma ubaba). Ngesikhathi esifanayo kudinga umsebenzi owengeziwe.
Uma umndeni has izingane ezindala, qiniseka awubandakanye isaneli. Lokhu kuzosiza "omdala" balahle nomona futhi okungadingekile. Ngaphezu kwalokho, ingane endala ngeke uzizwe ukunganakwa abazali.
Ngenyanga yesine zokuphila kwakhe ingane ithola inombolo yokugoma. Abazali nochwepheshe wezokwelapha kumelwe zilungiswe ngokucophelela kule nqubo. Ngemva wokugoma ezizophasiswa, kutuswa ukukala lokushisa wengane izinsuku ezingu-7. Ngokushesha uxhumane nodokotela uma nesenzakalo ledzingekako isicanucanu, ukuhlanza noma lokushisa esingeqile kumkhawulo 37,3 degrees.
Ukondla umntanakho kakhulu, ukuphendula umbuzo kanjani ukuthuthukisa ingane izinyanga 4. Into wukuthi kusukela izakhi kanye amavithamini incike kokubili empilweni yengane, kanye nabantu abadala.
Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzona. Uma namanje ibele, ungaqhubeka ukwenza kanjalo izikhathi eziyisithupha ngosuku. Uma yokudla bokuzenzela noma exubile, lowo ofanele kakhulu uzobe ukusuthisa ngezikhawu 4 amahora kahlanu ngosuku.
Ngokulinganiswa ukusuthisa, kakhulu, zikhona amaphuzu amaningana umbono. Ngokwesibonelo, abanye bathi nokuyenga ukungena kungenzeka ngisho kudingekile, nabanye ukuthi wenze lokhu kungenzeki. Ngokwesibonelo, engxenyeni lwenyanga yesine wokuphila wesibili umntwana angakwazi kakade ukunikeza ijusi izithelo noma berry puree. Faka nokuyenga kungaba kuphela emva kokubonisana udokotela wezingane.
Ngokuvamile, ukugwema ezinye izinkinga, kungcono ukuba amphuzise ikhalenda ekukhuleni kwengane 4 izinyanga. Kuyo uzokwazi ukugubha nini futhi kanjani baqhuba amakilasi okufundisa, Ikuphi ukudla ukunikeza Khuluma nengane yakho, impumelelo yakhe.
Njengoba sekushiwo, imibono lwezinyanga ezine ingane Ukudla ezahlukene. Manje sizoxoxa ngalokho anganikeza Kiddies esemncane ezinjalo.
Ukudla kwengane izinyanga 4, ungakwazi ukwethula fresh ogayiwe apula. Ungase futhi unike ubhanana kanye plums (ukolweni omncane) noma okusemathinini ezifanele zezingane. Nikeza Kiddies ecubuziwe lokuqala ngu amakota ke ngesigamu, bese lonke teaspoonful kokusuthisa ubisi noma ifomula. Ngo nje 'umthamo' emasontweni ambalwa luyanda 5 nezinkezo.
Izingane abanale komzimba noma diathesis, akudingekile ukunikeza isanqante juice, futhi apula Kungcono ukuthenga izinhlobo ophuzi noma oluhlaza. Zonke ayo ezisawolintshi kufanele ngaphandle kusukela ekudleni kwezingane ngokuvamile, kungakhathaliseki khona ukusabela nomzimba. Lokhu kuyadingeka ngoba izithelo ezisawolintshi kukhona nomzimba futhi kungabangela ukusabela ezingezinhle ngisho umuntu omdala. Isamba ukudla washisa, kuhlanganise ayo, purees, ifinyelela ilitha ngosuku.
Akuyona imfihlo ukuthi isikhathi lapho umntwana teething, okuthiwa a nightmare for umama. Ngokuvamile, namazinyo athoma ukuvela ngaphakathi kwezinyanga ezingu-6, kodwa ezweni lanamuhla ngokuvamile ngempela ingane teething kudala njengoba izinyanga 4. Ngezinye izikhathi amazinyo zinzima kakhulu ukubona. Kulokhu, izinsini kudingeka ngobumnene uthinte pad of Inkomba yakho ngomunwe. Kodwa nesenzakalo zikhathi clove izingane ngezinye izikhathi esibonakala iqiniso lokuthi izinga lokushisa likhuphuka, kukhona indle yisisu noma zamanzi. Uma le nqubo okubalulekile luhlupho, kungcono ushayele endlini kadokotela.
Ngalesi sikhathi, ukukhala ngenxa colic esiswini ingane mancane amathuba. Kancane kancane, Umntwana uqala ukujwayela ukuphila omdala futhi ukuhlola umhlaba ezingasho.
Lapho eneminyaka engu-izinyanga 4, izingane ziyakwazi ukusabela kubantu abahlukene. Izimo zethu zihluke kakhulu ezibaluleke uwukubonakaliswa injabulo lapho bebona abantu abadala. idatha Izingane ukubonisa imizwa ngokusebenzisa ukunyakaza ezifanele izibambo, imilenze umamatheke. Ngalesi ubudala, umntwana akesabi abangabazi, uyakujabulela noma ubani ozama ukungabi mbeni kuye. Ingane Ukuphoshoza, ongwaqa ezintsha kanye onkamisa.
Too izingane eziningi bangafunda kanjani ukuthi ujikise ikhanda lakho ngakwesokudla noma ngakwesobunxele, umsindo izwi ithoyizi noma umuntu omdala. Lapho eneminyaka engu-izinyanga 4, ingane othanda kakade ukulalela umculo nemisindo ehlukile.
ukukhahlamezeka kwendawo okusha
Njengoba bekhula, izingane buthule "ukuhambisa" endaweni entsha ngenxa imidlalo nekukhibika. Ekukhuleni kwengane ngaso izinyanga 4 yashesha uma ukubeka umntwana playpen. Kungenzeka kalula unamathisele ushingamu ngamathoyizi. Bazokusiza ukuthuthukiswa izingane. Ngaphezu kwalokho, imisebenzi zemfundo kanye imidlalo usana olunezinyanga 4 ubudala kuzothatha elula futhi kulula kakhulu uma ingane izoba enkundleni. Ungase futhi basakaze encane phansi (ku ngengubo noma uhlaka), uyoqinisekisa ngenkululeko nokuhlala kuzokhuthaza impumelelo ezintsha.
Imidlalo e izinyanga 4
Idlalwa kanjani nengane izinyanga 4? Lokhu kumele kwenziwe ngendlela efanayo njengoba ngaphambili - amathoyizi esikhulu esikhanyayo, izikhwama zigcwele amathuluzi ehlukene, ukuthuthukisa amahle motor amakhono izibaya zezingane kanye nombono nezwe. Perfect elula umunwe imidlalo.
Ezinyangeni 4 ingane imidlalo zemfundo abaluleke kakhulu. injabulo enkulu ukuba anikezwe izingane, uma wena ufaka Zithokozise esibukweni shatterproof ukuthi kungase kufakwe indlwana noma eba mat, enkundleni. Baby bazokwazi ukubukela reflection wakhe, ukumamatheka nokunyakaza. By the way, ingane ungaba play yabo yena izibambo-imilenze. Ngenxa yalesi amasokisi ephelele namasongo nge funny baby izilwane futhi "zvenelkami". Ngakho, ngezinyanga ezingu-4 ingane imidlalo emfundo nokungcebeleka, kanye nokuthuthukiswa kanye nokuzijabulisa. Nakani ngenxa kubo.
Kutfutfukiswa amasu okugumbuqela imibuso
ukuthuthukiswa kwengane 4 izelwe kuhlanganisa ukuthuthukiswa ukunyakaza entsha. Lezi zihlanganisa nokuzithiba amasu okugumbuqela imibuso umntwana esiswini sakhe. Uma ubeka umntanakho ngesisu sakhe, uyosusa ikhanda futhi isibambo. Kusukela ngaphandle Ungathi phansi push-omdala. Lokhu ukuhamba kusiza ukuthuthukisa imisipha nokuqonda kwezwe elisizungezile ezikhathini kangcono. Lapho ingane ozosigingqela ungene kwesisu, wayengase sokwethuka. Kuleli qophelo, kubalulekile ukuba sidumise, ukuze bathokozise futhi ukhuthaze ingane, ngakho-ke naye akunandaba.
Ingane futhi izinto
Kunemibono eminingi ngale ndaba: "Umntwana 4 izinyanga - indlela ukuthuthukisa?" Omunye kungaba bangaphezi ukuphikisa nokuphoqelela phikisana, kodwa ngamunye ngokuqinisekile ziyothinteka lapho ukuxhumana nengane izinto. Ezinyangeni 4 ingane iqala ukudonsa emlonyeni wami ngokoqobo konke efikayo usiba lwayo. Okufanele ukwenze ukuze kuvinjelwe ngokuziphatha okunjalo? Impendulo ilula - lutho. Lena ngempela inqubo engokwemvelo ulwazi oluthuthukayo lomhlaba, kodwa kukhona abanye imithetho, kokubona ukuthi ungakwazi avikela umntwana imiphumela emibi imisebenzi yayo ucwaningo. Okokuqala, khumbula ukuthi akufanele imshiye izinto ezincane emhlabeni umntwana. He is, njengoba sekuphawuliwe kakade, iqala ukuba ucabangele yinto encane le, bese ehudula ke emlonyeni. Ngaphezu kwalokho, uma ingane bangayibonisa iyiphi into ngokwakho, qiniseka ukuthi kuzoba ezibayeni zakho kancane.
Khumbula, ingane ingase ithathe isikhathi eside, ngisho into elula kakhulu, kodwa ephephile. Uma ukunikeza umsindo ke uzophawula ukuthi ingane yakho kuyajabulisa shaking wakhe, kangangokuthi umbelethisi izulu. Akubalulekile ukugcina izinto ezazimzungezile nge yamathebhu, okuzoba bakhonile kuphunyula kuyo bese uzama ukunambitheka okuqukethwe kwakhe.
Ngalesi sikhathi, ewusizo kakhulu izingane ukuba akhule kahle wengane mat ejimini. Uzokusiza ukwakheka kahle skeleton kwezingane.
Yini futhi angenza ingane ngemuva kwezinyanga ezingu-4?
Ngakho saxoxa umbuzo kanjani ukuthuthukisa ingane izinyanga 4. Izingane can kweminyaka enjalo abasha kakade kakhulu. Ngokwesibonelo, bafunda phenduka (njengoba sishilo phambilini). Ngaphezu kwalokho, ingane ifunda ukukhasa (kuqala ku-bo khaba), esiza yena nge ezingalweni kanye nasemilenzeni. Ngalesi sikhathi, ezinye izingane kakade kufana nokuthi uzama ukuhlala. Nokho, noma kunjalo, musa ukuphoqa izenzakalo futhi qiniseka ukugcina emuva imvuthuluka.
Kungakhathaliseki ubuzwe, umntwana 4 izinyanga kakade uqale ukubonisa izimpawu zenkulumo. Kumelwe icace amaqoqo "ba," "ma", "pa", okuyinto kamuva kuyoba bakudala kakhulu, kodwa amazwi abo kuqala. Kuyinto lezi abazali amaqoqo Ibhekwa ingane catchwords kuqala.
USuku Lwezingane nako kuyanda. Manje ungabukela amahora angaphezu kwamabili. Okwesikhathi esithile, izinyane kungaba jabulisa bona. Lokhu kuvumela abazali ukuba achithe isikhathi esincane nomunye futhi eMnyangweni wezaseKhaya.
Ngesikhathi esifanayo ingane ngenkuthalo ifunda emzungezile. Njengoba sishilo, uzama zonke izinto lokho kuwa ku usiba lwayo, ukudonsa emlonyeni. Ngakho kukhona ulwazi oluthuthukayo lomhlaba. Ukuziphatha encane kudinga ukuhlale ebhekiwe nokunakwa. Ngalesi sikhathi, it kalula kuminyanisa noma ngomhla uzolimala uzama ukuzama into "ngenhliziyo." Kungaba kuhle ukuqala ukususa zonke izinto ezicijile endlini futhi uwafihle, kungcono akakude lapho ingane ifunda ukukhasa uhambe, ngakhoke, endaweni yomsebenzi wakhe ucwaningo kuzokhulisa kakhulu.
Manje sesingasho ukuthi siqiniseka afingqa lokho can ingane 4 izinyanga, indlela ukuthuthukisa futhi wazi kanjani ukuthi umntwana wakho okhula kahle. Akufanele yini ngokushesha netwetwe ngalokho ingane yakho emva ekuthuthukisweni, uma wehluleka ukubhekana imisebenzi ukuthi siye ezichazwe kulesi sihloko. A "Ukusabela kancane" kancane sivame ukuba khona kunjalo, uma ingane Yazalwa ngaphambi kwesikhathi.
Musa ukuphelelwa yithemba uma ingane yakho ayifuni ukwazi ukuthi yini engashintsha usukwenzile lokhu noma ukuthi ontanga yayo. Khumbula ukuthi zonke izingane ukuthuthukisa ehlukile, akudingekile ukuqhathanisa imvuthu zabo omunye, ukuqhathanise kuphela (yokuthi ke Kwase kusele isonto elilodwa, ngenyanga edlule, wafunda, nokunye. N.).
Okungenhla sihloko - akusiyo uhlu lwezincwadi zeBhayibheli, okuyinto kumele zihloniphe futhi uhambisane 100% ingane.
Okubaluleke kakhulu, khumbula ukuthi kusukela ekuzalweni umntwana udinga ukunakekelwa yakho nokunakekela.
wena, abazali, kuphela obhekene nentuthuko yayo kanye nezempilo. Nikeza ingane yakho amaningi ukunakwa, ikhule ibe ubuhle, uthando. Kuphela kuleli cala, ingane ngeke yakheke ngokufanele futhi ngenkuthalo, ngisho uma iqhathaniswa nezinye kuyoba "lag" kancane. Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela yokuhlakulela ingane ngemuva kwezinyanga ezingu-4. Inhlanhla kuwe nengane yakho!
Indlela Songa Izinkombandlela sabakhubazekile-transformer nezinqubomgomo
Izihlathi Frostbite ingane. izihlathi Frostbite ingane - isithombe. Izimpawu izihlathi frostbite wengane
Kwenzekani uma ungenawo ocansini isikhathi eside: Amaqiniso kanye Izinganekwane
Ukuhlanza kukhompyutha yakho amafayela ezingadingekile
"Bacchus" (Caravaggio) - isithombe master enkulu